Pep Guardiola oo ka warbixiyay xaaladda dhaawac ee Laporte & Sterling ka hor kulanka Real Madrid – Gool FM
(Manchester) 23 Feb 2020. Hoggaamiyaha reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay xaalada dhaawac ee xiddigahiisa kala ah Aymeric Laporte iyo Raheem Sterling ka hor kulanka Real Madrid.
Manchester City ayaa ku jirta diyaar gorowgeeda ugu dambeeya ee kulanka todobadkan ay u safri doonan magaalada Madrid, si garoonka Santiago Bernabeu ay ugu soo ciyaaran lugta koowaad ee wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League.
Pep Guardiola ayaa tilmaamay in Aymeric Laporte uu diyaar u yahay in uu ciyaaro 90-ka daqiiqo ee kulanka Real Madrid, inkastoo badal lagu saray ciyaartii xalay ee Leicester City ay kaga adkaadeen 1-0.
Tani kaliya waxay u aheyd Laporte kulankiisii saddexad ee uu ku soo bilowdo tan iyo markii uu ka soo laabtay dhaawacii muddada uu ku maqnaa ee ka haleeyay dhanka jillibka.
Man City ayaa sidoo kale diyaar u ahay in ay soo dhaweyso Raheem Sterling kullanka Madrid, Guardiola ayaana kalsooni ku qaba in laacibkan uu qeyb ka noqon doono xiddighiisa u duuli doona Spain.
Haddaba Pep Guardiola oo ka hadlayay xaalada labadan ciyaaryahan kahor kulanka Real Madrid ayaa wuxuu yiri:
“Wuxuu i weydiistay in aan badalo, laakiin dhaawac ma uusan aheyn, wuxuu qaatay 5 bilood oo dhawac ah, taas ma aynan iloobin, waxa uu orday(cararay) in badan, waa uu ka duwanaa kulankii West Ham, way fududahay in aan koontaroolno, isagu waa OK.”
Sidoo kale Pep Guardiola ayaa ka hadlay haddii ay filayaan in Raheem Sterling uu qeyb ka noqon doono xiddigahiisa uu kula shartagi doono kulanka Los Blancos wuuuna yiri:
“In badan, in badan, in badan waa wuu wanaagsan yahay, waxaan rumeysnahay inuu diyaar yahay”.